ဖြစ်ရပ်မှန် Archives - Page4of 12 - YomaLan
ဒါကတော့ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာတကယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ…။ သိပြီးတဲ့သူတွေရှိပေမယ့် အခုထိငြင်းခုံနေရ တုန်းပါပဲ…။ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကရော ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ ဒီဖြစ်ရပ်အကြောင်းကို ဖတ်ကြည့်ပေးပါဦး…။ ၁၉၉၂၊ ၉ လပိုင်း၊ ၉ ရက်နေ့မှာ …
ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ (၈) နှစ်အရွယ်မှာပဲ ပန်းရောင် ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ကလေး တစ်အုပ်ကိုလက်ဆောင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။။ သူမရဲ့ငယ်ဘ၀လေးဟာ အလွန်စက်ဆုတ်မုန်းတီးဖွယ် ကောင်းခဲ့ပြီး ဘ၀ရဲ့ဒုက္ခတွေကို သူမဟာ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ အဖေနဲ့အမေဟာ …
အမိူးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ခူပ်အောင်ဆန်းနင့်အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများကိုလုပ်ကြံခဲ့ကြသောဂဠုန်ဦးစောနင့် လူသတ်တရားခံများကို ဘုရင်ခံဆာဟူးဘတ်ရန့်က1947 စက်တင်ဘာ20 ရက်နေ့တွင် စစ်ဆေးရန်အထူးခုံရုံးကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။ လူသတ်တရားခံများဖြစ်သော( ဂဠုန်ဦးစော ရန်ကြီးအောင် မောင်စိုး သက်နင်း …
ပေါင် 200 ကျော် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနေ မင်းသမီးလေးလိုလှအောင် ဝိတ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက မိန်းကလေး
လူတိုင်းမှာ ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိဘူး…. ဒါပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကောင်းဆုံး ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာ လူတစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်… ကိုယ်ကိုတိုင်ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စိတ်ပါပြောင်းလဲပစ်ရမယ်.. ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆို ကိုယ်လုပ်ရပ်တွေလည်း ပြောင်းလဲပစ်ရမယ် …
မောင်သောင်းကို အဖဦးဖိုးခင်၊ အမိဒေါ်စိန်တို့မှ ၁၉၁၇ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၆ရက်၊ကြာသပတေးနေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်ထဲက အင်္ဂလိပ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို စစ် ၃ကြိမ်တိုက်၍ သိမ်းပိုက်သွားခြင်းကို များစွာ ခံပြင်းဒေါသထွက်ခဲ့သည်။ …
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်း4600လောက်ကစပြီးကမ္ဘာ ကြီးဟာစတင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။တိရစ္ဆာန်မိူးစိတ်ပေါင်းများစွာ လဲ ကမ္ဘာကြီးနဲ့အတူစတင်ဖြစ်ပေါခဲ.့ပြီး ယခုခေတ်မှာ တော့ အခိူ့က မိူးသုန်းလုနီးပါး ပျောက်ကွယ်ခဲ့ပါတယ် အခိူ့မိူးစိတ် တွေလဲ ယခု ချိန် …
၁။ မြတ်စွာ ဘုရားဆံတော်မြတ်ကို မိမိဆံကျစ်၌် အမြဲကိုးကွယ်သော တိဿရသေ့ကြီး နာမကျန်းဖြစ်၍ ထိုဆံတော်မြတ်ကို ဌာပနာ၍ ဘုရားတည်လိုသောအခါ သိကြားမင်းသည် ထိုရသေ့၏ ဦးခေါင်းနှင့်တူသော ကျောက်တုံးကြီးကို …
ခိုးခြင်း မျိုးစုံကို ကျူးလွန်ခဲ.တဲ့ လူ ချမ်းသာ မိသားစု ရဲ . အကုသိုလ် အကျိုးပေး
လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ ခန့်က တောင်ဥက္ကလာပ တွင်လင်မယား နှစ်ယောက်နှင့်သမီး အပျိုကြီး တစ်ယောက် မိသားစု ရှိ၏။ ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာ သော်လည်း မလှူရက်မတန်းရက်ပေ။တရားအသိမရှိသလို ကိုယကျင့်တရား …
တိုးတက်ခေတ်မီချင်တဲ့နေရာမှာလိုသလိုဆွဲယူ ခေတ်မီနေကြပြီး ရှေးဟောင်းအယူသည်းမှုတွေကိုတော့ မပစ်ပယ်နိုင်ကြသေးဘူး။သေရွာပြန်လူတစ်ယောက်ကို လူနေရပ်ကွက်ထဲ ပြန်ဝင်ခွင့် မပြုနိုင်ဘူးဆိုရင် အသုဘလိုက်ပို့တဲ့ လူတွေပါ ရပ်ကွက်ထဲ ပြန်မဝင်ခိုင်းပါနဲ့။ သူတို့တွေလည်း သင်္ချိုင်းကုန်းကို ရောက်ခဲ့ကြတာပဲလေ။လူကို …
11.10.2017 (ဗုဒ္ဓဟူး​နေ့)ည ၉း၃၀ ခန့်​က မြိတ်​ မြို့နယ်​​ ကန်​​တော်​မင်္ဂလာ​ရေကန်​​ဘောင်​ထန်းပင်​တန်း​အောက်​မှ ! ကယ်​ကြပါဦးရှင်​! လို့ ​ကြောက်​လန့်စွာဖြင့်​​ ၄,၅ ကြိမ်​ခန့်​​အော်​ပြီး​ပြေးလာ​သောအမျိုးသမီးတစ်​ဦးရဲ့အသံ ကျယ်​​လောင်​စွာထွက်​​ပေါ်လာပါတယ်​.. …